भाडा: "P" शब्द | Martech Zone
बुधबार, जुलाई 2, 2014 Douglas Karr
महान मार्केटरहरू कुरा गर्न रमाईलो गर्छन् लगानी मा फर्कनुहोस्। हिजो, म एक रियल ईस्टेट कम्पनी संग एक बैठकमा भाग लिएँ जसको वेब रणनीतिका साथ केही चुनौतीहरू थिए। तिनीहरूको ब्रोशर साइट धेरै धेरै ड्राइभ गरिरहेको थिएन र तिनीहरूले आफ्नो बिक्री फनेलमा नेतृत्व ड्राइभ गर्न धेरै बाह्य कार्यक्रमहरूमा धेरै पैसा खर्च गरिरहेका थिए। हामीले पहिचान गरेको समस्या यो हो कि तिनीहरू ती सबै कम्पनीहरूका लागि अनलाइन प्रतिस्पर्धा गर्न भुक्तान गरिरहेका थिए।
उनीहरूको नेतृत्व रूपान्तरण दर र राजस्व प्रति नजिकबाट ड्राइभिंग, हामीले समग्र अनलाइन मार्केटिंग रणनीतिले प्रति लिड लागत घटाउन, सीसाको स increase्ख्या बढाउन, र तेस्रो पक्षहरूमा तिनीहरूको निर्भरता कम गर्न कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर कल्पना गर्न मद्दत गर्‍यो। यो एक रात्रि प्रक्रिया होइन - यसको लागि संक्रमण र गति निर्माण गर्न दीर्घकालीन रणनीति चाहिन्छ। त्यो प्रायः तेस्रा-पार्टीको मुख्य स्रोतहरूमा लत कम्पनीहरूको लागि चुनौती नै देखिन्छ।
उनीहरू बैठकबाट धेरै खुसी थिए र हामी चाँडै अर्को चरणहरूमा अनुसरण गर्नेछौं। म यसको बारेमा कलीएजमा कुरा गर्दै थिएँ, यद्यपि, म सहयोग गर्न सक्दिन तर सोच्छु कि यी सबै लगानीको लगानी, लगानीमा फिर्ता, मार्केटिंग खर्च, विज्ञापन लागत ... यो सबै एकल रणनीतिमा आकर्षित हुन्छ। मार्केटिंग बजेट विकास गर्न, तपाईंले कम्पनीको नाफा बढाउनु पर्नेछ।
पछि, म सामाजिक कुराकानीमा पढ्दै थिए कि कम्पनीहरूले कसरी ख्याल राख्छन् लाभ। म कुनै कुरामा सहमत छैन। With 99% कम्पनीहरूले हामीले काम गरेका छन - ठूला सार्वजनिक कम्पनीहरूबाट साना सुरुवात - मापन लाभ तर यो उनीहरूको सफलताको उपाय मात्रै हो। वास्तवमा, ग्राहकको अधिग्रहण, ग्राहक रिटेन्सन, कर्मचारी टर्नओभर, अधिकार, ट्रस्ट, र बजार सेयर जहिले पनि रडारमा सब भन्दा बढी भएको छ किनकी हामीले सहयोगी कम्पनीहरूलाई कुरा गर्यौं। म ईमानदारीसाथ कहिल्यै एक कम्पनी मा मलाई लाग्यो र भनेर भन्न छ हामीले नाफा बढाउनु पर्छ - तपाईं कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
त्योले भन्यो, यो निराश छ कि "P" शब्द एक भएको छ जो चर्को आवाजको सट्टा चर्को आवाज भन्दा चर्को आवाज हो। नाफा लोभको पर्यायवाची छैन। नाफा भनेको के हो कम्पनीहरूले भाडामा ल्याउन, कम्पनीहरूलाई बढ्नको लागि सक्षम गर्न, कम्पनीहरूलाई अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्न सक्षम बनाउन, र - अन्तमा - नाफा भनेको कर्पोरेसनमा कर लगाइन्छ। अर्को शब्दहरुमा, एक कम्पनी को लागी अधिक लाभ मार्जिन, यो हाम्रो समग्र अर्थव्यवस्था को लागी राम्रो छ। उच्च मुनाफाले हाम्रो गरिब नागरिकहरूलाई समर्थन गर्न उच्च कर राजस्व उत्पन्न गर्दछ। उच्च नाफाले मेरो जस्तो कम्पनीहरूलाई बढाउनको लागि सक्षम गर्दछ र रोजगारीको लागि अवसर खोजिरहेकाहरूको लागि रोजगारीको खोजीमा वा अग्रिम खोजीको लागि।
लोभ तब हुन्छ जब कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरू, ग्राहकहरू, र समाजको खर्चमा सम्पत्ति होर्डिंग गर्छन्। मलाई थाहा भएको अत्यधिक लाभदायक कम्पनीहरूले उनीहरूका कामदारहरूलाई राम्रोसँग भुक्तान गर्छन्, उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि अनुभव सुधार गर्न जारी राख्छन्, र लगानी गर्छन् र समाजमा धेरै चन्दा दिन्छन्। र तिनीहरू यसलाई स्वैच्छिक धनको संचयको माध्यमबाट गर्छन्, लिने छैनन्।
मलाई लाग्दैन कि हामी मार्केटिंग र यसको नाफामा परेको प्रभाव बारे शान्त हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ कि हामीले लाभ मनाउनु पर्छ ... ठूलो, उत्तम। र हामी यसलाई कर र नियमन मार्फत न्यूनतम तरिकाहरू खोज्नु हुँदैन। यो प्रतिरोधात्मक हो।
यहाँ छ तपाईंको नाफा वृद्धि गर्न र आफ्नो लाभ मार्जिन!
टैग: विज्ञापन लागतनिगमहरूलोभलगानीमार्केटिङमार्केटिंग खर्चमुनाफालगानी फिर्ता